Laba qalad oo weyn oo ka jiray maxkamadeynta Cabdirashiid Janan | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Laba qalad oo weyn oo ka jiray maxkamadeynta Cabdirashiid Janan
Laba qalad oo weyn oo ka jiray maxkamadeynta Cabdirashiid Janan
Dowladda Soomaaliya iyo hay’adaha garsoorka ayaa si bareer u sameynaya xadgudubyo Dastuurka ah kaas oo maalmihii la soo dhaafay noqday hadal-hayn oo ka jirta magaalada Muqdisho.
Inta ugu badan warbaahinta Soomaalida, siyaasiinta iyo qaybaha Bulshada ayaa ka war-heynin qaladaad xoog leh oo ka jira maxkamadeynta wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, iyo taliyihii degmooyinka Doolow iyo Beladxaawo, kuwaas oo maalin ka hor ka soo muuqday Maxkamadda Gobalka Banaadir.
Badweyn Online, ayaa baaritaan ay sameysay waxa ku ogaatay in ay qalad tahay in maxkamdda gobalka Banaadir ay qaado dacwadda Wasiir Janaan iyo taliyaha la xiran waxaana sababta diideyso ay tahay labadaan qodob ee kala ah.
1) – Maxkamadda Gobalka Banaadir kaliya waxay awood u leedahay in ay qaado dambiyada rayidka ah ee ka dhaca degmooyinka gobalka Banaadir laakiin awood uma lahan in ay Maxkamadda qaado kiisas kale oo ka dhacay meel ka baxsan Muqdisho.
2) – In Cabdirashiid Janan iyo Sarkaalka la xiran oo loo heesto eedeymo dilal iyo xadgubyo bini-aadnimo in lagu qaado maxkamad rayid ah ayaa sidoo kale ah qaladka labaad ee ka jira maxkamdeynta Wasiir Janan iyo Sarkaalka la xiran.
Yaa qaadi kara kiiska nuucaan ah?
Kiisaska la xariira maamul gobaleedyada dastuurka dalka waxa uu qabaa in ay qaado Maxkamad heer federaal ah laakiin Soomaaliya kama jirto maxkamad federaal ah. Sidoo kale waxay dadka qaar aaminsan yihiin in ay aheyd in kiiskaan oo arimo ciidan lugaha la galayo la geeyo Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya.
Arimahaan ayaa muujinaya in Garsoorka Soomaaliya uu yahay mid aan wali ka soo kaban dhibaatooyinkii gaaray. Waxay sidoo kale arintaan ay muujineysaa in Kiiska Janan iyo dadka la xiran ay yihiin arimo siyaasadeed balse uusan aheyn mid ku saabsan danta deegaanka.
Previous articleXOG:DF oo dhabar jabin kusameneyso Jubbaland dhanka Puntland iyo Wasiiro saameyn leh oo Puntland loo diray
Next articleMuqdisho oo laga mamnuucay dhammaan shirarka looga soo horjeedo DF&warar hada shegaayo in…
Akhriso: Xaaladda Guud Ee Fatahaada Baladweyne Iyo Gurmadka Socda
Wasiirka Qorsheynta Somalia Oo Loo Dhaariyay Ka Mid Ahaanshaha Xildhibaannada Golaha Shacabka
Dhageyso+kashifaad: Taliyaha NISA ee G/Banaadir oo Hub u socday Xuuthiyiinta Yeman kasoo iibsaday Jabuuti…
Madaxweyne Farmaajo oo ku Guuleystay Xalka ka gaarista Colaada Marka oo Madaxdii ka horeysay
Ciidanka Danab oo sheegay iney laayeen dagaalyahano Shabaab ah oo qaraxyo diyaarinayay
Dhageyso: Jubbaland oo ka digtay kacdoon ka dhasha xariga Wasiir Janan
Mucaaradka Oo Ku,hanjabay Inay Dhisayaan Xukuumada Cusub Sheegayna wakhtiga ay dhisayaan..
DEG DEG: Laba Qarax oo xooggan oo goor dhacay iyo ciidamo ka tirsan Danab oo lagu dilay